Ngaba ukuqala kwesiphelo kuza kwi-Intel kwiiMacs? | Ndisuka mac
Ngaba ukuqala kwesiphelo kuza kwi-Intel kwiiMacs?
Ukulandela isibhengezo esisemthethweni sika-Apple NgoLwesihlanu ophelileyo ngokunxulumene nePod yasekhaya, ngelishwa eliya kulibaziseka kude kuqale unyaka olandelayo, Imveliso entsha kuphela esiza kuyibona kubafana baseCupertino ngaphambi kokuqala kwe-2018 iya kuba yi-iMac Pro entsha. Ke ngoko, sikulethela iinyani ezinomdla malunga nale fowuni intsha yeapile.
Umzekelo, njengenkcukacha emangalisa ngakumbi, abaphuhlisi UJohnathan Levin kunye noSteve Troughton-Smith, Ndifumene iprocessor okanye Enye iprosesa kwi-Intel yesiqhelo efakwe kwi-iMac yenkampani yaseNyakatho Melika.
Lo mvelisi, we ARM, ibonakala njenge Fusion A10Okumangalisayo kukuba iyafana ne-iPhone 7. Ngokucacileyo, le processor yesibini ifuna ukubonelela ngolawulo olukhulu kumsebenzisi ngaphezulu kwenkqubo yokusebenza. Ngale ndlela, ezinye izinto esinokuzenza kule iMac intsha ziya kwenziwa ngale processor intsha.
Iyaqondakala into yokuba kolu tshintsho ngu-Apple, Ifuna umgama ukusuka kuxhomekeko oluqhelekileyo lweMacs yohlobo yiprosesa ye Intel. Mhlawumbi le ntshukumo sisiqalo sesiphelo sesi sivumelwano sentsebenziswano esibuyela emva kwiminyaka.
Sukuyenza impazamo. Ayiloxesha lokuqala ukuba iApple inyuse iprosesa engekho Intel kwiikhompyuter zabo. Ngapha koko, iiMacBook Pros ngeTouch Bar zineprosesa ARM, Kubizwe T1, Eqhuba imisebenzi esele ichazwe kwangaphambili yisoftware.
Kule meko, ichip ARM eya kunyusa iMac Pro entsha izakusebenza njengesongezelelo kwi-chip esele ikhona Intel. Oku kuthetha ukuba iya kubonelela ngozinzo kunye nokuthembeka okukhulu kwimveliso entsha evela kubafana kwibhlokhi, kwiimeko ezininzi ekufuneka zijongane nazo.
Ukongeza, kudala kwavakala ukuba i-Apple yenza okufanayo kwiikhompyuter zayo njengezixhobo zayo eziphathwayo, nyusa iiprosesa zakho, ulibale malunga Intel, iQualcomm okanye naliphi na elinye icandelo. Mhlawumbi lo mzuzu ukufutshane kunokuba ubonakala.
Ukuba siqikelela ngezi ntlobo zenguqulelo ezenziwa yiApple kwiMac 2017 entsha, Singatsho ukuba kukho injongo ecacileyo kwicala lenkampani yaseNyakatho Melika yokunciphisa ukubaluleka ekufumene Intel kwiikhompyuter zabo kule minyaka idlulileyo. Ingaba ucinga ntoni? Siza kubona ukuba kwenzeka ntoni ekugqibeleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ngaba ukuqala kwesiphelo kuza kwi-Intel kwiiMacs?
Ubhaka we-MacBook kunye nabahlobo babanye
Dibana neTempad, isicelo seVitamin Notes seMacOS